1959 John Friend, onye guzobere Anusara yoga, ka amụrụ.
1987 Enyi hapụrụ ọrụ nke ndụmọdụ gbasara ego iji bụrụ onye nkuzi yoga zuru oke.
Anọrọ 1989 Enyi shaktipat (edemede ime mmụọ) site na Gurumayi mgbe ị na-eme njem na India.
Emebere 1997 Anusara, Inc.
E gbazitere akụ na 2010 wee bido atụmatụ maka “Centre,” yoga na ịme ngosi nka, na Encinitas, California.
2012 (February) Asịrị gbawara banyere nhọrọ onwe onye na nke azụmahịa nke John Friend mere.
2012 Anusara, Inc. weghachitere mgbe ihere na ọpụpụ nke ndị nkuzi Anusara.
2012 (October) Enyi maliteghachiri ịkụzi ihe dịka onye nkụzi Hatha Yoga nọọrọ onwe ya.
2012 (November) Anlọ akwụkwọ Anusara nke Hatha Yoga, ụlọ akwụkwọ zuru ụwa ọnụ nke onye nkụzi duziri.
Anusara® yoga mepụtara n'okpuru mmụọ nsọ na nduzi nke John Friend. Na mbido nke ịmepụta akara ahụ, Enyi jụrụ guru ya, Gurumayi, banyere aha (Williamson 2012). Ọ zigara ya Douglas Brooks, bụ ọkà mmụta Tantra nke na-akụzi na Mahadum Rochester. Brooks bụ onye na-asụgharị ya n'oge ahụ Kularnava Tantra mgbe ị bi na Shree Muktananda Ashram, isi ụlọ ọrụ Siddha Yoga - ụdị yoga nke ntụgharị uche na-eweta na United States na 1970s site na Muktananda ma ugbu a Gurumayi na-eduzi ya. Enyi jụọ Brooks anya ka ọ na-atụgharị ahịrịokwu site na akwụkwọ nsọ, “Site n’ịbanye n’amara dị ugbu a, nwata akwụkwọ ga - enwe ike ijide ihe bara uru n’aka guru.” Okwu ahụ anusara comes from saras, nke pụtara na-asọ. A na-asụgharị akwụkwọ nke Anusara yoga anusara dị ka “na-asọpụta n’amara,” na-ese okwu n’okwu buru ibu nke ahịrịokwu ahụ. Enyi gara n'ihu na-agwa ndị ọkà mmụta nke Tantra ndị ọ metere enyi n'oge ọ nọrọ na ashram a ka ọ na-emepe yoga Anusara, mana Enyi bụ onye kachasị mma.
Dị ka Enyi zụrụ ndị nkuzi Anusara yoga, ụfọdụ gbagoro n’elu dị ka kpakpando, nke ọtụtụ ụmụ akwụkwọ hụrụ n’anya. Agbanyeghị, John doro anya na ọ bụ ezigbo Anusara, klaasị ya na-adọta ọtụtụ puku ndị na-eso ụzọ ya. N'ezie, a na-asọpụrụ ya ruo n'ókè nke na ụfọdụ weere ya dị ka guru. Otú ọ dị, enyi na-agọnahụ ọnọdụ ọ bụla nke nghọta karịa ọdịdị Chineke nke ọ kwenyere na mmadụ niile nwere (Edemede nke Enyi, 2010). N'agbanyeghị nke a, ike ọchịchị dị n'etiti enyi na ndị ọzọ - ọbụnadị ndị ha na ya rụkọrọ ọrụ na nzukọ ahụ. Fọdụ ndị nkuzi yoga na ndị ndu Anusara ga-emesịa boo Enyi ebubo iji ike ya eme ihe na-ezighị ezi.
Okporo ụzọ gbagoro Enyi dịka hatha yoga guru malitere n'oge ọ dị obere. Mama ya kọọrọ ya akụkọ banyere yogis, ọ kpebikwara na otu ụbọchị, ọ ga-enweta ikike ndị yog nwere. Ọ malitere ịmụ Hatha Yoga mgbe ọ dị afọ iri na atọ na obodo ya bụ Youngstown, Ohio. Onye nkuzi yoga ya, nwanyị ọ na-akpọ Margaret, ya na nne ya, kpughere Enyi ka otu ndị nkuzi mmụta nke Ọwụwa Anyanwụ na Western. Site na ntorobịa ya na ntorobịa ya, Enyi mụtara nkà ihe na omume nke Theosophical Society, Wicca, Sufism, New Thought, na Buddha. Mmụọ ya iji chụsoo omume yoga na ntụgharị uche bịara, n'ọtụtụ akụkụ, site n'ịgụ akụkọ ọdịnala nke Paramahansa Yogananda (1893-1952) na njedebe 1970s. Ruo oge ụfọdụ, ọ gbasoro usoro ntụgharị uche nke nkuzi nke onwe ya, nzukọ nke Yogananda guzobere. Site na mgbe ọ dị afọ iri na ụma ruo taa, Enyi nwere mmasị na njikọ dị n'etiti mmegharị ahụ na obi ụtọ mmụọ. A hụrụ nke a n'omume Sufi ịgba egwu, mana ọ kachasị karịa na yoga ọ na-anabata. TKV Desikachar (Vdị Viniyoga), Patabbhi Jois (ụdị Ashtanga Yoga), na Indra Devi so na ndị nkuzi yoga ndị Enyi mụtara n'okpuru ha. N'ime ndị a, ya na BKS Iyengar rụkọrọ ọrụ oge niile, mechaa bụrụ onye nkuzi nke Iyenagar Yoga ma jee ozi na ndị isi oche maka nzukọ Iyengar.
Enyi gara Texas A&M University, ebe ọ natara akara na Finance na Accounting, na mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, ọ rụrụ ọrụ dịka onye ndụmọdụ gbasara ego. N’afọ 1987, ọ hapụrụ ọrụ a ikuzi yoga oge niile. Mgbe ọ na-amụrụ akwụkwọ Iyengar, ọ gara India niile na 1989. Na Ganeshpuri, nke dị nso na Mumbai, ọ zutere Gurumayi, bụ isi nke agbụrụ guru nke a maara dị ka Siddha Yoga. Ọ natara shaktipat (edemede ime mmụọ) site na ya ma n'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị malitere ịkụziri ndị yoga ihe ọmụmụ yoga, nke bụ isi na ashram na South Fallsburg, New York. N'ebe ahụ, e kpughere Enyi na nkà ihe ọmụma dị iche iche nke Hindu, gụnyere nkà ihe ọmụma Tantra, nke ga-ekere oke oke na nhazi ya Anusara yoga.
N'ịmepụta ụdị nke yoga yoga, Enyi mepụtara okwu nkuzi dị mma. Okpomoku dika “isi n’obi” wee buru ihe ngosi nke klas Anusara yoga wee mee ka umu akwukwo lelee omume yoga ha anya dika ichaputa ihe nke ime mmụọ na nke ime mmụọ. Enyi gbara ụmụ akwụkwọ ume ka ha rụọ ọrụ site n'ọ anụ na udo dị n'ime. N'ịzụ ndị nkuzi, ọ gwara ha ka ha, "Gwa ụmụ akwụkwọ ahụ okwu na nke onwe ma ọ bụ nke obi, ọ bụghị na ahụ ha dị n'elu ọkwa na-abụghị onye" (Enyi 1998: 101). O jikọtara anụ ahụ na nke mmụọ site na imepụta usoro iwu nke na-ejikọ akwara na ọkpụkpụ nke ahụ na usoro ike okirikiri, ma ọ bụ "loops na spiral." Site na ịmepụta ụkpụrụ nke "na-eme ka ahụ kwekọọ na Blukpụrụ kacha mma" (Enyi 1998: 39), ụzọ ya si dị iche na nke Iyengar, bụ onye rụrụ ọrụ karịa site n'ogo nkịtị. Enyi mara nke ọma ma mee ka yoga dị ka ọ na-azụ ndị nkuzi wee dee akwụkwọ ntuziaka maka usoro ọzụzụ ndị nkuzi sara mbara.
Enyi haziri nnọkọ ukwu nke ndị ọkachamara yoga Anusara site na 2008 ruo 2012 ma sonyekwa na Yoga Journal nzukọ ebe klas ya dọtara ìgwè mmadụ dị otú ahụ nke na ọ dị mkpa ka e mee ihe oyiyi ya na ntanye n'ime ụlọ ahụ. Ọbịbịa Anusara yoga bịara bụrụ nke ama ama na ememme egwu, dịka Wanderlust. N'ọmụmụ ihe, nzukọ, na ememme, Enyi mere ka njikọ nke Anusara yoga sie ike na Tantra site na ịhazi ụfọdụ mmiri mmiri nke Siddha Yoga (Sally Kempton na Carlos Pomeda) na ndị ọkà mmụta okpukpe Hindu na Tantra (Douglas Brooks, Paul Muller-Ortega, na William Mahony) ikwu okwu ma nye klaasị. Ka oge na-aga, onye gụrụ akwụkwọ na-eto eto, nke ya na Siddha Yoga na-akpabu, Christopher "Hareesh" Wallis, sonyeere otu a wee bụrụ onye nkuzi a ma ama n'etiti ndị ọkachamara yoga Anusara. A na-agba ndị na-achọ asambodo nkuzi Anusara yoga ume ka ha soro ndị nkuzi ọ bụla ma ọ bụ ndị niile na-amụ ihe. Enyi bidoro webata ukwe nke Hindu n'ime uloru, ma otutu kirtana Ndi otu a na-eme njem mgbe nile soro Enyi, tinyere Krishna Das, Benjamin na Heather Wertheimer (nke amara dika Shantala), na MC Yogi. Enyi gụnyere ịme ihe nkiri na nnọkọ ndị a dị iche iche site na ngosipụta egosipụtara egwu, egwu, na ihe nkiri. Fọdụ n'ime ihe ngosi ahụ gosipụtara hooping hooping na ọkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ, bụ nke juru ebe niile na nnukwu ememme ndị dịka Burning Man.
Anusara, Inc. toro site na nmali na oke n'ogo iri na ise mbu nke ndu ya. Na njedebe ya, Anusara nwere ihe dịka Ndị nkụzi 1,500 na ndị ọkachamara 500,000 na mba iri asaa. Ihe ndị a niile kwụsịrị na 2012 - naanị na mbido Enyi nke "Igniting the Center 2012 World Tour" nke ga - agbakwunye yantras (geometry dị nsọ) na pyramid ike na ngwakọta nke omume. Na Febụwarị, weebụsaịtị wepụtara ihe akaebe na-emegide Enyi, nke akọwapụtara na Ngalaba Okwu / Nsogbu n'okpuru. Ka ọ dị ugbu a, mgbe obere oge gachara maka ntụgharị uche onwe ya na ọgwụgwọ, Enyi alaghachila na usoro njegharị, na-eme ihe na mpụga nzukọ Anusara yoga dị ka onye nkuzi nkuzi hatha yoga nọọrọ onwe ya - n'agbanyeghị "otu n'ime ndị nkuzi yoga hatha kachasị nwee mmụta na ahụmịhe n'ụwa. , ”Dabere na ebe nrụọrụ weebụ Enyi (“ Banyere John Friend ”nd).
Ka Anusara yoga idozigharị, ihu ọhụrụ apụtawo n'ihu. Otú ọ dị, site na nkuzi nke mmetụta na-emerụ emerụ nke ike ka dị ọhụrụ, ọ dịghị onye a na-ele anya dị ka onye nwere ikike. A na-eme mkpebi site na kọmitii. Anusara yoga nwere ikike atọ ndị nkuzi bụzi ndị nwe na ndị njikwa nke ụlọ akwụkwọ Anusara ọhụrụ nke Hatha Yoga (ASHY) B: BJ Galvan, William Savage na Jane Norton.
Galvan agagharịwo na United States, Australia, South America, na Europe, na-amụ ọrụ n'okpuru Enyi ma na-enyere ya aka na klaasị. Ọ nọ na-akụzi ụwa niile kemgbe 2007 wee soro na-ewebata Anusara yoga na South America. Ka ọ dị ugbu a, Galvan na-eduga n'asụsụ yoga asụsụ Anusara na ọzụzụ gburugburu ụwa. N'ịbụ onye nwere ọmịiko banyere omume yoga ya, ọ bụkwa onye Reiki Master, onye ọrụ Hypnobirthing®, onye bụbu onye na-azụ ahịa azụmaahịa, onye ọrụ afọ ofufo maka ndị otu obodo, na nne na nne nne.
William "Doc" Savage bụ ọkachamara na nkuzi yoga otu-na-otu. Ọ na-akụzi yoga afọ ise ka ọ gụchara akwụkwọ n'okpuru ọtụtụ ndị nkuzi, gụnyere John Friend, Adam Ballenger, BJ Galvan, na Martin na Jordan Kirk. Savage sokwa Douglas Brooks gaa India iji mee ka nghọta ya miri emi banyere Tantra. Tupu izi yoga, ọ nọrọ afọ iri abụọ na abụọ na US Air Force. Ya na nwunye ya, Donna, kuziri yoga na Black Hills nke South Dakota yana mpaghara n'okpuru moniker Dakota Yogi.
Jane Norton, onye njikwa nke atọ nke ASHY, nwere mmasị na Anusara yoga mgbe ewepụrụ mgbu aka aka mgbe ọ gụsịrị klas mbụ ya na 2003. Dị ka Savage, Norton bụ ọkachamara na iji ụkpụrụ mgbatị Anusara yoga iji nyere ndị mmadụ aka na-agbake site na mmerụ ahụ na ọnọdụ mgbu na-adịghị ala ala. Site na 2005-2007, ọ gara United States dị ka onye njikwa boutique Anusara yoga. Norton bi n'àgwàetiti Martha's Vineyard ma nwee ọ cookingụ na nri, ịgba osimiri, na ịkọ ugbo.
Anusara yoga, dị ka ụdị anụ ahụ yoga - makwaara dị ka asana, hatha yoga, na yoga yoga - dị ka ụdị ndị ọzọ nke oge a, ụwa zuru ụwa ọnụ nke yoga anụ ahụ, mana nwekwara njirimara ndị mere ka ọ dị iche. Omume a na - eme gburugburu ebe a na-etinye uche na ya, tinyere njikwa iku ume. Pesdị yoga nkịtị nwere ike ịbụ ntụpọ site na ahịrị abụọ na-agbatị site na nke ụwa ruo na nsọtụ nke ọzọ. Ntinye yoga nke Anusara dara na njedebe ime mmụọ n'ihi na ọ kwusiri ike ịzụlite àgwà "obi" yana, maka ndị nkuzi yoga Anusara, mgbe ha na-amụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ sitere na ọdịnala yoga nke India. Achọrọ ịgụ gụnyere Bhagavad-Gita, Yoga Sutras, Shiva Sutras, na Hatha Yoga Pradipika.
Ngalaba nkà ihe ọmụma nke weebụsaịtị nke nzukọ ahụ na-ekwu, sị: “Ọ bụ site na ike ngosi nke Grace ka anyị ji teta n'eziokwu ahụ na nrugharị Chineke a bụ ọdịdị anyị dị mkpa. Ihe omuma a di elu na-eme ka ochicho obi anyi me ka anyi jiri obi anyi niile na-aru oru n'ime ndu anyi. On anyị yoga ute anyị nka na-enye anyị onye ìhè na anyị pụrụ iche music na-esite n'obi ekpere nke na-agbakwunye ọzọ mma, ịhụnanya, na ịdị mma na ụwa ”(“ Philosophy ”nd)
Enyi mepụtara echiche nke yoga mgbe ọ ghọtara na echiche ya adabaghị na nke onye nkuzi ya, BKS Iyengar, onye nakweere nkà ihe ọmụma nke Onyebuchi dị na Yoga Sutras (Ajụjụ ọnụ nke Enyi, 2010). Samkhya bụ usoro nwere uche abụọ nke kewara ụwa n'ime purusha na prakriti: mmụọ na-adịghị agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe ma ọ bụghị ihe ọmụma. N'ihi na Onyebuchi ihe ùgwù purusha ma si otú ahụ na-eweda ụwa anụ ahụ ala, Enyi kwadoro ụzọ Tantric na-abụghị nke abụọ.
Tantra bụ usoro ihe ọmụma na omume dịgasị iche iche mepụtara na India n'oge emepechabeghị. André Padoux na-enye nkọwa dị mfe mgbe ọ na-ede banyere Tantra dị ka "mbọ itinye kama, ọchịchọ, n'echiche niile nke okwu ahụ, na ọrụ nke nnwere onwe. . . ọ bụghị ịchụ ụwa a n'àjà n'ihi nnwere onwe, kama iji weghachite ya, n'ụzọ dịgasị iche iche, n'ime echiche nke nzọpụta "(2004: 15). Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ n'azụ nkà ihe ọmụma nke Anusara yoga bụ ịhapụ echiche na-enweghị isi ma kwado onwe ya kama na ọchịchọ Chineke, ma ọ bụ uche Chineke, nke a maara dị ka iccha. Specificdị Tantra a kapịrị ọnụ nke Enyi mụtara n'oge ya na Siddha Yoga bụ Kashmir Shaivism. Ndị ọkà mmụta sitere na ọdịnala Siddha Yoga bụ ndị ha na Anusara yoga jikọtara onwe ha na ndị otu dị iche iche nke Tantra. Douglas Brooks kwadoro Shrividya Tantra, nke na-elekwasị anya na Shakti, ma ọ bụ ike okike nke nwanyị, nke Brooks na-akụzi n'okpuru nkwado nke Rajanaka Yoga ọhụrụ. Paul Muller-Ortega kwekọrọ na Trika Tantra, nke na-elekwasị anya na Shiva, a na-ewere ya dị ka nnukwu eziokwu kachasị dị iche na ikewapụ nke Shakti. Muller-Ortega na-akụzi usoro ya n'okpuru moniker, Blue Throat Yoga.
Confusionfọdụ mgbagwoju anya malitere maka ụmụ akwụkwọ yoga Anusara ahụ nke mụụrụ ndị nkuzi abụọ a ihe. Ya mere, Enyi chepụtara okwu ahụ Shiva-Shakti Tantra dị ka ụzọ isi tinye akụkụ nke abụọ otu, yana echiche nke ụwa ka ukwuu. Tantric ọkà mmụta Christopher Wallis (2012) kwuru na isiokwu maka Bay Shakti na okwu ahụ “sara mbara ma na-edochaghị anya.” Nkà ihe ọmụma a sara mbara n'ezie ka ọ na-ejikọ Buddha na Hindu Tantra, nkà ihe ọmụma nke China na Japan, nkà ihe ọmụma Celtic na Wicca, na ọbụnadị echiche ndị Australia. Isi okwu na ihe ndị a niile, maka Enyi, bụ na eziokwu dị n'usoro ma dịkwa mma, na ọkwa niile nke ndụ na cosmos nwere njikọta (Mkparịta ụka Coy nke Enyi, Bay Shakti 2010). Douglas Brooks na ndị ahụ na-eme yoga Anusara bụ ndị gbasoro nkuzi ya megidere nkà ihe ọmụma ọhụrụ ahụ, mechaa nwee otu akụkụ nke hapụrụ Anusara yoga na-eso nkwupụta ọjọọ ahụ. Agbanyeghị, Shiva-Shakti dabara na Tantra nke nwere ike ịtụgharị anya na nke Anusara yoga nọchiri anya ya. Onye nkụzi Anusara bụbu onye nkụzi Christina Sell kwupụtara ọkwa a mgbe o kwuru na blọọgụ ya: “Rajanaka Tantra bi n’ime ụwa nke Shiva-Shakti Tantra na enweghị esemokwu n’agbanyeghi na o nwere echiche ụwa nke ya, na-arụ ọrụ nke ọma na isi ihe dị iche. Dika ihe nkuzi putara ihe nke Kashmir Shaivism nke Paul [Muller Ortega] na eme ka ha di ndu na akwukwo ya. Dị ka nkuzi zuru oke nke Jizọs, Budhha, Wicca na ihe ọ bụla ọzọ na-eme ka anyị bịarukwuo nso na ahụmịhe nke ịma mma anyị, ọ delightụ, na mmụba okike ”(2011).
Akụkụ ọzọ nke nkà ihe ọmụma Anusara yoga nwere njikọ metụtara anụ ahụ na ụkpụrụ ntọala nke omume, ịhazi, na omume. Àgwà na-abata tupu ọhụụ ọ bụla amalite dị ka onye Anusara na-arụ ọrụ "meghere Grace." A ghọtara amara ka ike nke mmụọ nke mkpughe nke na - emegharị ọnọdụ ahụ; ọ bụ ike nke na-emeghe ahụ, uche, na mmụọ mmadụ. Kpụrụ ntọala nke abụọ, nhazi, chọrọ ijikọ akụkụ dị iche iche nke mmadụ. Thirdkpụrụ nke atọ, omume, metụtara "ike sitere n'ike nke anụ ahụ" (Enyi 1998: 25). Echiche nke "shri" (ịma mma na ụba) na-ekerekwa nnukwu aka na nkà ihe ọmụma Anusara yoga ma bụrụ nke na-eme ka ọchịchọ ime mmụọ na nke ụwa dị n'otu.
Ọ bụ nkà ihe ọmụma nke Anusara yoga nke mere ka ndị na-eso ụzọ ya dịrị n'otu dị ka websaịtị si gosipụta: “Anusara yoga nwere njikọ chiri anya nke onye ọ bụla na ụkpụrụ ime mmụọ nke Anusara yoga, dị ka ịme mma na ụdị ya niile, eziokwu, na ịsọpụrụ nnwere onwe okike nke Chukwu na mmadụ niile. Onye ọ bụla kwekọrọ n'eziokwu na Grace na-arụ ọrụ dị mkpa na mmụba nke ọma nke omume ha, klaasị, na obodo n'onwe ya "(" Philosophy "nd).
A na-ewu yoga Anusara na ememe nke ahụ nke na-eme ka e nwee mmetụta nke obodo ma jikọọ ndị na-eme ihe na nnukwu eziokwu nke mbara igwe. A na-eji okwu iji jikọta ahụ mmadụ na obi ma kụnye ezi omume. Ahụ na-aghọ mba ụwa ka nke niile etoju nke eziokwu coalesce na nke na-ebuli anụ ahụ na nke ime mmụọ. Klaasị yoga ọ bụla na-amalite site na ịrịọ arịrịọ nke Enyi mụtara n'aka nne ya na nwata yana nke ọ zutere ọzọ n'oge ya na Siddha Yoga. Ọ gwara Krishna Das ka ọ dee abụ olu ụtọ maka amaokwu ndị a, bụ ndị na-eme ka ụmụ akwụkwọ yoga Anusara dịrị n'otu site na gburugburu ụwa. A sụgharịrị okwu Sanskrit n'azụ kaadị anusara yoga dị ka, "Ana m asọpụrụ isi nke ịbụ, Onye Auspicious, onye nkuzi na-enwu gbaa n'ime na n'èzí, onye na-ewere ụdị nke Eziokwu, Nghọta, na Obi ,tọ, anaghị anọ, jupụta n'udo. Nye bụ onye nweere onwe ya kpamkpam ma na-egbuke egbuke site na mmụọ Chineke. ” (Nke a bụ nkọwa karịa ntụgharị ntụgharị; mkpụrụ okwu mbụ, dịka ọmụmaatụ, namah shivaya gurave sụgharịa ọzọ dị ka, "Ana m akpọrọ Guru isi, onye bụ Shiva.") Ọ bụrụ na a na-akụzi klas ahụ n'ọnọdụ ụwa karịa mgbatị ahụ, enwere ike ịhapụ ma ọ bụ jiri egwu dị mfe nke mantra mmeghe om ugboro atọ.
Na-eso abụ na ịkpọ isiala nye ibe ha na onye miri emi nke okwu ahụ, Namaste, onye nkụzi na-akọ akụkọ ime mmụọ ma ọ bụ isiokwu ọ tụleworo. Isiokwu a setịpụrụ ụda maka klas ahụ ma zoo ya n'oge niile ka ụmụ akwụkwọ wee rụọ ọrụ dị ukwuu site n'ike mmụọ nsọ dị ka nke sitere n'ike sitere na mpụga. Weebụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ na-ekwu n'okpuru Usoro, “Isiokwu ọ bụla na-enye nduzi maka ikike ịkpa oke nke na-enye omume na ume ọ bụla na poses. N'ụzọ dị irè, a na-egosipụta ụdị nsogbu niile Anusara yoga nwere site na 'n'ime.' ” Nkuzi nke ndi nkuzi na-enye ndị nkuzi aro ka ha mepụtara ebumnuche maka klaasị ọ bụla. Thesefọdụ n’ime ha bụ: “Inweta ịdị mma ebumpụta ụwa anyị, ọ joyụ anyị, ịhụnanya anyị, iru eru ma ọ bụ ike Chukwu site na njiri,” na “Ime ngosipụta dị ka ngosipụta nka nke mmemme mmụọ mmadụ” (Enyi 1998: 93). Klas na-ejedebe site na ozu ahụ, ma ọ bụ “izu ike ikpeazụ,” nke na-eso nke ikpeazụ namaste.
Ememe klaasị bụ ihu Anusara yoga nke kpaliri ndị mmadụ gburugburu ụwa. Ọ bụ ezie na ọ na-elekwasị anya na ahụ nkịtị, “Imeghe obi” bu ihe di nkpa n’ime klas ahu. Gbaso klas, e wuru obodo na ụfọdụ ụlọ ọrụ Anusara yoga site na-akparịta ụka na tii. Anfọdụ Anusara yoga kulas (obodo) ịhazi ọpụpụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya n'oge mkpa site na ịkwadebe nri ma ọ bụ nye njem. Groupsfọdụ dị iche iche na-ejidekwa uru iji nye onyinye nye ndị ọrụ na-abụghị ndị ọrụ.
Ebumnuche nke nzukọ Anusara yoga - nke a na-akpọbu Anusara, Inc. na ụlọ akwụkwọ Anusara nke Hatha Yoga ugbu a - bụ ịnye nkuzi na ịkọ ndị nkuzi. Ọzọkwa, nzukọ a eritela uru site n'ire uwe, ihe nkwado yoga, na usoro mgbasa ozi na kọmputa. Offọdụ n'ime akwụkwọ, CD, na vidiyo ha na-ere bụ ndị ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ mepụtara. N’oge na-adịbeghị anya, ndị ọkà mmụta abụọ ebipụtara akwụkwọ ha nke Anusara Press: Christopher Wallis, onye dere Tantra ọkụ (2011) na William Mahony, ndị dere Ezigbo Lovehụnanya: Obi-echebara echiche na Narada Bhakti Sutra (2011). Mana n'ụzọ bụ isi, nzukọ ahụ na-ere Anusara yoga n'onwe ya. Andrea Jain na-akpọ Enyi "ọgbọ nke abụọ yoga yoga," onye "ahọrọ site na Iyengar Yoga na Siddha Yoga ma mesịa webata, kọwaa, ma wusie ụdị Anusara yoga ike" (2012: 13-14).
N'okpuru nduzi nke Enyi, nzukọ ahụ ruru nchikota ego ya na 2010 mgbe ọ were $ 2.8 nde, dị ka otu ederede ederede kwadebere maka ndị na-etinye ego na 2011 (Roig-Franzia 2012). N'oge ahụ, Anusara, Inc. na-anwa ịkwado ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na nka na Encinitas, California, nke ga-elekwasị anya na omume na ụkpụrụ nke ọdịnala yoga na Tantra. Enyi huru otu obodo na etolite na Center na Encinitas (Akwukwo a gbara nke Enyi, 2010). Dabere na Akụkọ ndị dị na Coast, Anusara, Inc. abanyela aka na nkwekorita nke afọ 73 maka ụlọ 8,269 square-foot maka $ 1.86 nde na Ọktoba 2010 (Cagala 2012). Asịrị ahụ, n'akụkụ ụfọdụ, gụnyere ebubo metụtara ego maka ọrụ a, mana nyocha egosighi ebumnuche iwu na-akwadoghị. Emebiri atụmatụ na mgbazinye ya na 2012.
N'oge asịrị ahụ gbawara, e nwere ndị nkuzi yoga 1,200 "Anusara-sitere n'ike mmụọ nsọ" (gụchara akwụkwọ opekata mpe awa 200) yana karịa ndị nkuzi ruru 300 nke ọma (emechara ọzụzụ opekata mpe awa 500, n'etiti ihe ndị ọzọ siri ike) maka ngụkọta nke ihe karịrị 1,500 nkụzi. Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọkachamara bụ ihe dịka 500,000. Dabere na Wendy Willtrout, onye njikwa ọrụ maka Anusara Inc., emere atụmatụ ọnụ ọgụgụ a dabere na ọnụọgụ ụmụ akwụkwọ John kuziri n'otu afọ, gbakwunyere ụmụ akwụkwọ ndị nkuzi nwere ikikere. Ugbu a, Willtrout na-ekwu, enwere ndị nkuzi Anusara yoga 177 na ndị nkuzi 656 Anusara-Inspired. Ya mere, ọnụọgụ ndị nkuzi belatara na ọnwa ndị na-esochi Febụwarị, 2012, ihe dịka 700. offọdụ n'ime ndị a, gụnyere John Friend, agaala bụrụ ndị nkuzi yoga hatha. Ọnụ ọgụgụ dị mma abanyela na nzukọ na-enweghị uru a na-akpọ Kula Evolution. Ndị fọdụrụ ugbu a na-ahazigharị iji gaa n'ihu n'okpuru aha ụghalaahịa nke Anusara yoga.
A na-enyefe akwụkwọ akwụkwọ Anusara niile, vidiyo, na ụghalaahịa gaa ụlọ akwụkwọ ọhụrụ a kpụrụ aha ya bụ Anusara School of Hatha Yoga (ASHY), ụlọ akwụkwọ ndị nkuzi na-enweta uru, nke ga-enye ndị nkuzi ikike na Anusara yoga n'ọdịnihu. Ndị nkuzi anusara yoga nyere ikikere na-anọchite ụlọ akwụkwọ a na-anọchite mpaghara ise: United States, Canada, Central na South America, Europe na Middle East, na Asia na Pacific. ASHY European na Middle East mpaghara metụtara mba niile dị na European Union, Israel, na Turkey. Mpaghara ya Asia / Pacific gụnyere Australia, New Zealand, China, Singapore, Japan, Taiwan, Korea, Malaysia na Thailand. Anlọ akwụkwọ Anusara nke Hatha Yoga ga-abụ naanị onye nyere ikike nke ụghalaahịa Anusara yoga ga-abụkwa etiti ụwa zuru ụwa ọnụ iji chịkwaa usoro ọmụmụ na asambodo na mpaghara ise a.
Kula Evolution bụ ihe ọzọ bụ isi nke dochiri Anusara, Inc. Dị ka weebụsaịtị ha si kwuo, ha anaghị eso yoga Anusara n'ụzọ ọ bụla. N'okwu ha, “Site na ịhazi Kula Evolution anyị na-agbaso ụzọ ọhụrụ ya na nzukọ ọhụrụ nke topụtara site na ahụmịhe anyị n’oge gara aga. Otu Otu n'ime nzukọ anyị gụnyere netwọkụ dị mfe nke ndị nkuzi Anusara ugbu a ma ọ bụ mbụ na ụmụ akwụkwọ na-akwado ya nwere onwe isonye. Na nke abụọ, anyị ga-edegharị akwụkwọ usoro ọmụmụ na ihe nkuzi ndị nkuzi ”(Evolution Kula nd).
Nkatọ nke Anusara yoga malitere ogologo oge tupu asịrị nke 2012. complainedfọdụ mere mkpesa na ndị na-arụ ọrụ ya na-elekwasị anya na nke ọma na-ekpuchi echiche ziri ezi banyere ọnọdụ mmadụ. Dịka ọmụmaatụ, ọkà mmụta Tantric bụ Christopher Wallis zoro aka na nkà ihe ọmụma yoga Anusara dị ka "Pollyanna" karịa Tantra (Ajụjụ ọnụ onye edemede nke Wallis, 2010). Ke ibuotikọ emi New York Times, Mimi Swartz tụnyere John Friend na Christian nkwusa ozioma Joel Osteen (2010).
A katọkwala Anusara yoga maka ịhazi ndị na-azụ ya, nyocha nke yoga na-agakọkarị. Jeremy Carrette na Richard King, ndị edemede nke Ualityre Ime Mmụọ: Mwepu Ndọrọ nke Okpukpe, na-arụ ụka na otu dị iche iche nke oge a, gụnyere ndị na-akwalite omume ọwụwa anyanwụ, na-erigbu ndị mmadụ maka ahụmịhe ime mmụọ maka uru ego. Ọzọkwa, ndị ode akwụkwọ na-ebo ebubo "mmụọ nke onwe" maka nleghara anya n'okwu gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Mimi Swartz kwuru na Anusara, Inc. na-eweta ego ha ruru nde dọla abụọ kwa afọ, na Enyi ahụ na-akwụ onwe ya ụgwọ opekata mpe ihe ruru $ 100,000 kwa afọ. A naghị ele nke a anya dị ka nsogbu nke Enyi kwuru, sị, “Ọ dịghị ihe dị iche na nkà ihe ọmụma yoga na nkà ihe ọmụma azụmahịa. Anyị na-asọpụrụ mmụọ, dabere na ọhụụ anyị na ndụ dị mma "(Swartz 2010). Na 2010, Anusara jikọtara ya na onye na-ere ahịa nke ngwa ngwa yoga maka uru nke ọ bụla. Nkwupụta nke nkwado gosipụtara John Friend nke Blog: “Na Manduka, enwere m ike ịjụ, 'Gịnị dị m mkpa na akwa yoga?' Obosara. Ìhè, ka apịaji na dabara mfe n'ime ụbọchị akpa ma ọ bụ akpa. E mepụtara ya n'inwekwu udo n'ụwa. ' - John Enyi ”(Nọvemba 8, 2011). Dị nnọọ ka e boro Enyi ebubo iji amamihe azụmaahịa ya wee mepụta mmekọrịta ga-enyere ya aka ire ngwaahịa ya, a katọkwara ya maka iso ndị ọkà mmụta na ndị Swwam na-emekọ ihe maka uru ya iji ree Anusara yoga.
Ngosipụta nke ihe akaebe megide John Friend na mbipụta weebụsaịtị, www.jfexposed.com,, nke pụtara otu ụbọchị na ọkara na Febụwarị nke 2012, bụ ahịhịa ọka ikpeazụ achọrọ maka ụfọdụ ndị nọ na-ajụ ntụzịaka Anusara yoga iji mee nkwụsị dị ọcha. Maka ndị ọzọ nọ ebe dị anya site na nhazi nke nzukọ ahụ ma nwee obere mmekọrịta na Enyi, akụkọ ahụ bịara dịka mkpughe na-agbawa obi. Ebubo ndị ahụ gụnyere itinye aka na Enyi na omume ego a na-enyo enyo, na mmekọrịta ya na ọtụtụ ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ, ụfọdụ n'ime ha lụrụ di na nwunye, na ọgbụgba ndụ Wiccan nke ji ememe mmekọahụ, na iji wii wii na itinye ndị ọrụ n'ihe ize ndụ site na ịnakwere ngwungwu wii wii. n'aha ya. N'oge na-adịbeghị anya, Enyi kwuru na, "Onye zitere igbe na wii wii na ọfịs na-enweghị m maara na onye ọrụ were meghere ya n'amaghị ama" (Akwụkwọ ozi onwe onye na onye edemede, Disemba 11, 2012). O kwukwara na “ọgbụgba ndụ ahụ ejitụbeghị mmekọahụ dị ka ememe okpukpe!” (Disemba 11, 2012). Agbanyeghị, na mbụ o degara otu n'ime ndị otu ahụ akwụkwọ ozi na nkwupụta ahụ, "Dịka akụkụ nke emume anyị, mụ na gị kwetara na anyị ga-eji ike mmekọahụ / nke anụ ahụ n'ụzọ dị mma ma dị nsọ iji nyere aka rụọ nrụpụta ọrụ nke omume anyị, nke bụ otu ihe jikọrọ ọtụtụ gburugburu Wiccan, dị ka ị maara ”(YogaDork 2012).
Na February nke 2012, yoga conglomerate malitere ịda. Otu ìgwè ndị nkuzi yoga Anusara yoga gbara mbọ ihu nsogbu a site na ịchọ Enyi ka ọ rituo dị ka onye isi ụlọ ọrụ Anusara, Inc. wee kwụsị izi ihe ozugbo. Enyi kwesiri izi ihe na ogbako na Miami, o gara n'ihu na atumatu a, na-achota nkatọ ndi ozo site na ndi na-esopu iwu. Na Machị 20, 2012, Enyi dere leta mgbaghara nye ndi obodo Anusara yoga nke o kwuputara na ya were oke oru ya maka “iguzosi ike n’ezi ihe” site na nmekorita nke ya na ndi nwanyi di. Akpọrọ ebubo ahụ gbasara enweghị ike ego dị ka eziokwu, na azaghị ebubo ebubo gbasara wii wii.
Roig-Franzia kwuru na otu isiokwu maka Washington Post na ọtụtụ ndị nkuzi ekwupụtala na Enyi agbanweela ụkpụrụ nduzi maka nzukọ na 2009, na-ekwe ka mmekọrịta dị n'etiti ndị nkuzi Anusara na ụmụ akwụkwọ ha. Enyi emeela obere obere Wiccan na oge ahụ ya na ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ya akpọrọ Blazing Solar Flames nke ọ bụ naanị nwoke. “Onye isi nchụ aja” nke onye ndụ mbụ a kpughere n'ajụjụ ọnụ a gbara maka The Daily Ọhịa na ememe ndị metụtara Enyi na ọtụtụ ụmụ nwanyị bụ mmekọahụ. Mgbe ọ gwara Enyi na ọ chọrọ ịhapụ ọgbụgba ndụ ahụ, ọ rịọrọ ya ka ọ nọrọ, na-ekwu na ọgbụgba ndụ ahụ bụ "batrị" maka Anusara yoga (Crocker 2012). Ọ nwere ike ịbụ Enyi lere ike mmekọahụ anya dị ka ntọala nke isi ike ya, echiche dị na "aka ekpe" Tantra.
Amy Ippoliti, onye bụbu onye nkuzi yoga Anusara kwuru maka Beast Daily, “Thedị nke ịrụ ọrụ maka eze ga-enweghị ike ịrụ ọrụ na 2012. Ọ bụrụ na enwere otu ihe dị mma na-esite na nke a niile, ọ na-adị ndị mmadụ ka ha ga-akụzi na-ejikọtaghị akara. Ha maara ugbu a na mkpokọta siri ike karịa echiche onye ọ bụla ”(2012). John Friend ka nwere Anusara, Inc., nke na-arụ ọrụ ugbu a dị ka ụlọ ọrụ na-ejide maka nwe akara ụghalaahịa, ndị niile enyerela ikike na Anusara School of Hatha Yoga. Yabụ, ụdị ahụ, Anusara yoga, na-aga n'ihu ọbụlagodi na enweghị onye guzobere ya. BJ Galvan kwuru, "Ekwenyere m na ọkwa zuru ụwa ọnụ, ndị mmadụ ka na-eme Anusara n'ihi na asịrị ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe omume America" ​​(Akwụkwọ ozi onwe onye na onye edemede, December 7, 2012). Andrea Jain na-ekwu na ọ bụ ụkpụrụ ya na-ewu ewu maka akara ya, na-ekwupụta, "Ihe mere yoga yoga ji bụrụ ọpụrụiche bụ na ọ gosipụtara echiche bụ na ịdị mma dị na mmadụ niile n'ụzọ na-akwado ndụ" (2012: 12). Ihe ọ bụla a ga-ekwu maka omume onwe onye John Friend, akụkụ nke omume ime mmụọ na nkuzi nkuzi ọ malitere na-agbasa - ma site n'aka ndị nkuzi ahụ hapụrụ aha Anusara na ndị na-aga n'ihu na-akwalite ya site na Anusara School of Hatha Yoga .
"Banyere John Friend." nd Nweta site na http://www.johnfriend.com/about-john-friend/ na 10 December 2012.
Ibe akwukwo Anusara. nd “Nkà ihe ọmụma” na “Usoro.” Nweta site na http://www.anusara.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=73 na 8 December 2012.
Cagala, Tony, 2012. "'' Center 'maka Anusara Yoga anaghịzi enye gị mgbazinye." Akụkọ banyere Coast, April 26. Nweta site na http://thecoastnews.com/2012/04/the-center-for-anusara-yoga-no-longer-holds-lease/ na 6 December 2012.
Carette, Jeremy R. na Richard King. 2005. Ualityre Ime Mmụọ: Mwepu Ndọrọ nke Okpukpe. New York, NY: Ntughari.
Crocker, Lizzie. 2012. "John Friend Anusara Scandal: In the Wiccan 'Sex' Coven." Beast Daily, April 15. Nweta site na http://www.thedailybeast.com/articles/2012/04/15/john-friend-anusara-scandal-inside-the-wiccan-sex-coven.html na 3 December 2012.
Enyi, John. 2011. "Nkebi nke 2: Ajụjụ ọnụ nke John Friend-Dancing with the Divine, 2011 World Tour." Bay Shakti, March 1. Nweta site na http://bayshakti.com/part-2-interview-with-john-friend-dancing-with-the-divine-2011-world-tour na 8 December 2012.
Enyi, John. 2011. John Friend nke Blog. November 8. Accessnweta na http://www.anusara.com/index.php?option=com_wpmu&blog_id=2&Itemid=250 na 11 December 2012.
Enyi, John. 1998. Nkuzi nke ndi nkuzi, 12 nke ed. Woodlands, TX: Anusara Press, 2009.
Jain, Andrea R. 2012. "Branding Yoga: Ikpe nke Iyengar Yoga, Siddha Yoga, na Anusara yoga." Rogakwuru Okpukpe 2: 3-17.
Ebe obibi John Friend. nd “Banyere John Friend.” Nweta site na http://www.johnfriend.com/about-john-friend/ na 8 December 2012.
KulaEvolution. nd Nweta na http://kulaevolution.wordpress.com/ na 11 December 2012.
Padoux, Andre. 2004. "Tantrism." Encyclopedia of Religions, ed. M. Eliade, Macmillan, 14: 273; akpọrọ na DG White. 2006. Kiss nke Yogini: "Mmekọahụ Tantric" na ya Ndịda Asia. Chicago, IL: Mahadum nke Chicago Press.
Roig-Franzia, Manuel. 2012. "Scandal contorts ọdịnihu nke John Friend, Anusara yoga." The Washington Post, March 2. Nweta site na http://articles.washingtonpost.com/2012-03-28/lifestyle/35450478_1_anusara-yoga-mats-web-site na 2 December 2012.
Ree, Christina. 2011. Blog, Eprel 20. http://christinasell.blogspot.com/2011/04/few-reflections-on-shiiva-shakti-tantra.html abanye na 3 Disemba 2012.
Schwartz, Mimi. Ọnwa Asaa 21, 2010. "Yoga Mogul." New York Times. Nweta site na http://www.nytimes.com/2010/07/25/magazine/25Yoga-t.html?pagewanted=all na 7 April 2012.
Wallis, Christopher (Hareesh). Abali 28, 2012. “Gini bu Shiva-Shakti Tantra? John Friend ọ̀ rụzuru ya? ” Bay Shakti. Nweta site na http://bayshakti.com/what-is-shiva-shakti-tantra-did-john-friend-make-it-up na 2 December 2012.
Williamson, Lola. 2013 (na-abịa). "Stbịakwute Ihe Dị Nsọ: John Friend na Anusara yoga." Na Gurus nke Yoga nke Oge a, nke Ellen Goldberg na Mark Singleton dere. New York: Mahadum Oxford University.
Williamson, Lola. 2012. "Usoro usoro." A na-ewere Anusara dị ka "akara" karịa usoro yoga n'ihi akara ahịa ya. N'ihi eziokwu ahụ bụ na ihe karịrị otu puku mmadụ n'ụwa niile etinyela ọtụtụ awa ọzụzụ na oke ego dị ukwuu iji bụrụ onye nkuzi yoga Anusara, na ọtụtụ n'ime ha ahapụla n'oge na-adịbeghị anya iji kụzie ihe n'onwe ha ma ọ bụ sonyere ndị otu nkwụsị, ndị akara akara ụghalaahịa na-egosi na ọ bụ sistemụ John Friend mepụtara na nke na-aga n'ihu taa n'okpuru uslọ Akwụkwọ Anusara nke Hatha Yoga, bụkwa ụghalaahia edenyere.
YogaDork. 2012. "John Friend, Isi nke Anusara: Ebubo." Feb. 3. Nweta site na http://yogadork.com/news/john-friend-head-of-anusara-wiccan-leader-sexual-deviant-pension-withholding-homewrecker-the-accusations/ na 16 December 2012.